2014 November & December Donation Event « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2014 November & December Donation Event
2014 - Nov & Dec Event
We are delighted to announce that ODF Myanmar received 920,000 Kyats (1153 SGD and 20,000 Kyats) for November and December, 2014 donation (48th monthly donation) plan.
On 6th January 2015, our representative has already donated the collected money to “Eden Center for Disabled Children” which is located at 56, War Oo 4th Street, Phawkan Quarter, Insein Township, Yangon.
Being established in April 2010 with 14 children, the center is now taking care of 165 children (boy – 100, girls – 65) in total.
The vision of the center is to offer support in re-establishment, education, mental development and other social requirements of the physically and mentally impaired children.
Our heartfelt thanks to all our donors and friends, who cooperated with us in offering helping hands Eden Center. We also share our merits to everybody. Thank you!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာ အလှူ (၄၈ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ)အဖြစ် အမှတ် (၅၆) ဝါဦး (၄)လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ “ဧဒင် မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ ပြုစုရာ ရိပ်မြုံ” အတွက် အလှူငွေ ကိုးသိန်းနှစ်သောင်းကျပ် (၁၁၅၃ စင်္ကာပူဒေါ်လာ + မြန်မာငွေ ၂၀၀၀၀ ကျပ်) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
အလှူငွေများကို အလှူရှင်များကိုယ်စား ODF Myanmar အဖွဲ့ ၏ ကိုယ်စားလှယ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စတင် တည်ထောင်ချိန်တွင် ကလေး (၂၄)ဦးသာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကလေး စုစုပေါင်း (၁၆၅) ဦး (ကျား – ၁၀၀၊ မ – ၆၅) တို့ အား ပြုစုစောင့်ရှောက်လျက် ရှိပါသည်။
ရိပ်မြုံ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မသန်စွမ်းကလေးများနှင့် ဥာဏ်ရည်နိမ့်ကလေးများအတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး၊ ပညာရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေးနှင့် အခြား လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံအတွက် စေတနာ၊သဒ္ဓါထက်သန်စွာ လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များအားလုံးနှင့်တကွ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကူညီကြသော မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ မိမိတို့၏ အလှူဒါနကိုလည်း အားလုံးကို အမျှပေးဝေပါသည်။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံကြပါစေ။